Zero Plastic Founder – ကျော်ကျော်ထိုက် – Live the Dream
အချိန်မိနစ်ပိုင်းလေးပေးပြီး သင့်ဘဝ တိုးတက်မယ့် အခွင့်အရေးကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆုပ်လိုက်ပါ။ လူအမျိုးမျိုး အဖြစ်အပျက် အထွေထွေကြားထဲက အောင်မြင်သူတွေ ပြောပြတဲ့ သူတို့ဘဝ ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပုံတွေကို ဘယ်လို အတုယူဖွယ်ရာ မြင်ရမလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ ခြေလှမ်းများနှင့် မနက်ဖြန် အစီအစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ Live the Dream Media အဖွဲ့သားတွေက စွန့်ဦးထီထွင်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ အပ်ချူပ်ဆိုင်လေးမှာ ဝင်ရောက်ကူညီရင်း ကိုယ်တိုင်ကျောင်းစရိတ် ရှာခဲ့ရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်….
ပစ္စည်း အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဖန်တီးတီထွင်ရတာကို ဝါသနာထုံခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်…. ဒီလို အခြေအနေကနေ အစပြုခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်ဟာ ဘဝရဲ့ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုမျိုးတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသလဲ…? ကိုကျော်ကျော်ထိုက် တစ်ယောက် ကိုယ်ကျွမ်းကျ
င်တဲ့ ကဏ္ဍကနေ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်ရာကမ္ဘာကြီး ပိုမိုသာယာလှပလာစေဖို့ ဘယ်လိုပါဝင်လှုပ်ရှားနေလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီအင်တာဗျူးကနေတစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်အားထုတ်မှုကဘယ်လောက်အင်အားကြီးသလဲဆိုတာတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေအပြင် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်ကျော်ထိုက်ရဲ့ လူငယ်တွေဆီ အကြံပေးစကားကိုပါ သိရှိရမှာဖြစ်လို့ အချိန်ပေးရကျိုးနပ်စေမှာ သေချာပါတယ်။
ခြေလှမ်းများနှင့် မနက်ဖြန် (၈) – Professional Training Centre Founder